तपाईं जान्दछन् कि कति तारा ताराहरू - प्रिन्ट गर्न टिप्पणीहरू र पाठ
तपाईं जान्दछन् कि कति ताराहरू खडा हुन्छन् - पाठ
पाना सङ्गीत र पाठ के तपाइँ ताराहरू कति तारा छन् भनेर थाहा छ?
के तपाईँ ताराहरू खडा छन् कति जान्नुहुन्छ?
के तपाईंलाई थाहा छ कि कति बादलहरू जाँदैछन्?
परमेश्वरले भगवानलाई गणना गर्नुभएको छ,
कि उहाँले एक सम्झना छैन
सम्पूर्ण ठूलो संख्यामा,
पुरा ठूलो नम्बरमा।
तपाईंलाई थाहा छ कि कतिवटा टुक्राहरू खेल्छन्
कितने माछाहरू पनि सुन्दर छन्
ईश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई नाम दिए,
कि तिनीहरू सबै जीवनमा आए,
कि उनि अहिले खुसी छन्,
कि उनी अहिले खुसी छन्।
तपाईं जान्दछन् कि कति छोराछोरीहरू प्रारम्भिक छन्
आफ्नो बिस्तारबाट उठ्नु,
कि उनि बिना हेरचाह र प्रयास हो
दिनमा खुसी हुनुहुन्छ?
भगवान स्वर्गमा सबै कुरा छ
उनको खुशी, उनको खुशी,
पनि तिमीलाई थाहा छ र तपाईंलाई माया गर्छ,
पनि तिमीलाई थाहा छ र तपाईंलाई माया गर्छ।
Noten वान Kinderlied तपाईं जान्दछन् कि ग्राफिक फाइल खोलिएको कति ताराहरू उपलब्ध छन्